Infant Warmers Factory, Suppliers | China Infant Warmers Manufacturers
musha» Products » Medical Equipment » Perinatal Care » Infant Warmers
Somunhu ichiita mabasa akawanda rakazaruka kutarisirwa hurongwa chipiriso zvinogadzirisa unogona kuvimba, ari FXQ4A anoita basa rako nyore painenge nokuchengeta maitirwo ezvinhu ako hwomutambarakede. Izvi kurapa kuchikuva unokubvumira kukurumidza kupindura wenyu ane ngozi murwere sezvo revatema zvose zvamunoda kuti thermoregulation uye kufema rutsigiro munguva nokumutswa mishonga. Mukuwedzera, magadzirirwo Gadziriro iri rakatorwa makore edu ruzivo kuti vairamba kutevera pfungwa yokupa varwere venyu pangozi zvakanakisisa.
The FXQ4B chikwata yedu pakati magadzirirwe mucheche vanopenya inodziya ine yakasiyana chafariz zvakatipoteredza vakurumidze uye renguva izwi neonates. Uyezve, nokumutswa nenhumbi zvinogona optioneel parutivi chikwata chiri zvashata ezvinhu.
kukwanisa kupa zvakanaka kutarisira varwere mwana, uye kudzibatsira mu zvashata mamiriro kana zviri NICU.
FXQ4 yedu chikwata inopa zvakanakisisa pamwe Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri thermoregulation varwere achangoberekwa pavanenge vari zvashata kana kurapa jaundice munyika rakavhurika kutarisirwa hurongwa.